เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2564 03:25
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น ได้ให้บริษัทอีริคจำกัด ทำการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในที่ทำการด้วยหลอด UVC บริเวณห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น จำนวน 1 หลอด, ห้องบริการคนต่างด้าว จำนวน2หลอด ห้องอำนวยการ จำวน2หลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง uvc+ ozone สำหรับฆ่าเชื้อหลังปิดทำการ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนผู้มารับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
ໃນວັນທີ 13 ເດືອນສິງຫາປີ 2021 ເວລາບ່າຍ3ໂມງຕໍາຫຼວດ, Lt. Col. Sarawut Preedakorn, ກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແຂວງຂອນແກ່ນ. ໄດ້ມອບໃຫ້ບໍລິສັດ Eric ຈໍາກັດ. ການຕິດຕັ້ງລະບົບຂ້າເຊື້ອຫ້ອງການດ້ວຍໂຄມໄຟ UVC ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ, ແຂວງຂອນແກ່ນ, 1 ທໍ່, ຫ້ອງບໍລິການຄົນຕ່າງດ້າວ,2ທໍ່2ທໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງບໍລິຫານມີ 1 ເຄື່ອງ uvc+ ເຄື່ອງໂອໂຊນສໍາລັບເຮັດilັນຫຼັງຈາກປິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອandັ້ນແລະຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ. 2019 (covid-19) ໃນວັນທີ 13 ເດືອນສິງຫາປີ 1964 ເວລາບ່າຍ3ໂມງຕໍາຫຼວດ, Lt. Col. Sarawut Preedakorn, ກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແຂວງຂອນແກ່ນ. ໄດ້ມອບໃຫ້ບໍລິສັດ Eric ຈໍາກັດ. ການຕິດຕັ້ງລະບົບຂ້າເຊື້ອຫ້ອງການດ້ວຍໂຄມໄຟ UVC ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ, ແຂວງຂອນແກ່ນ, 1 ທໍ່, ຫ້ອງບໍລິການຄົນຕ່າງດ້າວ,2ທໍ່2ທໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງບໍລິຫານມີ 1 ເຄື່ອງ uvc+ ເຄື່ອງໂອໂຊນສໍາລັບເຮັດilັນຫຼັງຈາກປິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອandັ້ນແລະຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ. 2019 (covid-19)
၁၉၆၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်ညနေ ၃ နာရီတွင်ရဲ။ ဒုရဲမှူးကြီး Sarawut Preedakorn၊ Khon Kaen ခရိုင်လူ ၀ န်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး Eric Co. , Ltd. အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်း UVC မီးအိမ်များနှင့်ရုံးသုံးပိုးသတ်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး၊ Khon Kaen ပြည်နယ်၊ ပြွန် ၁ ခု၊ ဂြိုလ်သားဝန်ဆောင်မှုအခန်း၊ ပြွန် ၂ ခု ပိတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ရန် uvc+ အိုဇုန်းလွှာစက် ၁ လုံးပါသောအုပ်ချုပ်ရေးခန်း၌ပြွန် ၂ ခု ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ ၀ န်ထမ်းများယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုတည်ဆောက်ရန်။ ၂၀၁၉ (covid-19) မရ၁၉၆၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်ညနေ ၃ နာရီတွင်ရဲ။ ဒုရဲမှူးကြီး Sarawut Preedakorn၊ Khon Kaen ခရိုင်လူ ၀ န်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး Eric Co. , Ltd. အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်း UVC မီးအိမ်များနှင့်ရုံးသုံးပိုးသတ်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး၊ Khon Kaen ပြည်နယ်၊ ပြွန် ၁ ခု၊ ဂြိုလ်သားဝန်ဆောင်မှုအခန်း၊ ပြွန် ၂ ခု ပိတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ရန် uvc+ အိုဇုန်းလွှာစက် ၁ လုံးပါသောအုပ်ချုပ်ရေးခန်း၌ပြွန် ၂ ခု ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ ၀ န်ထမ်းများယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုတည်ဆောက်ရန်။ ၂၀၁၉ (covid-19) မရ
On August 13, 2021 at 3:00 p.m. Police Lieutenant Colonel Sarawut Preedakorn, Chief of Inspector. Khon Kaen Immigration has given to Eric Co., Ltd. Installation of an office disinfection system with UVC lamps in the meeting room area Khon Kaen Immigration Operation Center, 1 tube, Alien service room,2tubes2tubes in the administrative room with 1 UVC+ OZONE machine for disinfection after closing To build confidence and safety for police officers under the jurisdiction and people who receive services to prevent the spread of the corona virus. 2019(covid-19)